Guddiga Dawladda Hoose | Vaikuttajan reittikartta
Guddiga Dawladda Hoose
Dawladda hoose ama guddiga degmadda waa jirka dowladnimo ee ugu muhiimsan ee dawladda hoose ka mid ah. Habka dowlada hoose u shaqeyso iyo sida ay maaliyadeedu u maareyso ayaa waxaa maamula Guddiga Dawladda Hoose. Guddiga ayaa go’aamiya adeegyada iyo mashaariicda dowlada hoose ay maalgelineyso iyo waxa ay karto in ay qabato. Qaabka kan, Guddiga Dawladda Hoose ayaa sidoo kale haya boos muhiim ah marka ay timaado go’aan ka gaarida arrimaha quseeya dad yowga dhalinta yar.
Xubnaha Guddiga ayaa waxaa laga doortaa doorashooyinka dowlada hoose ee afartii sanadoodba mar dhaca. Guddiyada waxay hayaan boos aaminaad ah, taasoo ay micnaheedu tahay shaqadooda Guddinimo waa mid aan lacag lagu siineyn oo howlahaas waxay qabtaan ayaga oo howlahooda kale sii wata.
Guddiyada go’aanadu waxay gaaraan dad weynaha hortooda kaasoo uu qof kasta karo in uu ka soo qeyb qaato. Dawladdaha Hoose ee qaarkood ayaa sidoo kale muhiim ah in doorashooyinka internetka lagala socodo. Sidoo kale waa suurto gal in degmooyin badankood arrimaha laga laga codeyn doona kulamadooda xigga aad ka aqrido Guddiga boggooda internetka. Haddii adeeggan marhoreyba diyaar ku ahayn magaaladaada, ula xiriir Guddigaaga degmada oo kula tali in la sameeyo!
Faahfaahin sida aad ula xiriiri la’hayd guddiyada waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee degmadda. Faahfaahinta sida aad ula xiriiri la’hayd degmooyinka waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee Mas’uuliyiinta Gobol iyo tan Degmo ee Urrurada Finnish (Kuntaliitto).